Ụdị mmetọ mmiri: njirimara na nsonaazụ | Green Renewables
Mmetọ mmiri bụ mgbanwe kemịkalụ ọ bụla, anụ ahụ ma ọ bụ nke ndu nke nwere mmetụta ọjọọ na mbibi n'ahụ ihe ndị na-eri ya. Echiche nke mmiri emetọọ na-ezo aka na nchịkọta na ntinye nke otu ma ọ bụ karịa ihe ndị ọzọ na-abụghị mmiri n'otu aka ahụ ruo n'ókè nke na ọ na-akpata enweghị aha na ndụ ndụ, oriri mmadụ, ụlọ ọrụ, ọrụ ugbo, ịkụ azụ na ihe ntụrụndụ na nsogbu anụmanụ. Enwere ọtụtụ ụdị mmetọ mmiri dabere na mmalite ya na mmebi ya.
Ya mere, anyị ga-enyefe akụkọ a iji gwa gị ụdị mmetọ mmiri dị iche iche dị na ihe na-esi na ya pụta.
1.2 Mmiri dị n'elu
1.6 Mmetọ site n'ihe kwụsịtụrụ
1.8 Mmetọ erimeri
2 Isi mmalite na ụdị mmetọ mmiri
3 Ụdị mmetọ
3.2 Chọpụta ihe
3.3 Chemical inorganic
3.5 Ngwakọta organic
Mwụfu mmanụ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mgbe niile na-emetụta anụ ọhịa ma ọ bụ ndụ mmiri. Mana ikike ịgbasa dị ukwuu.
Mmanụ ahụ na-arapara n'ájá nnụnụ mmiri, na-egbochi ikike igwu mmiri ma ọ bụ ofufe, si otú ahụ na-egbu azụ. Mmụba mmanụ na-awụfu na mwụfu na mbupu ebutela mmetọ oke osimiri. Ihe dị mkpa: Mmanụ anaghị agbaze n'ime mmiri, ọ ga-etolite nnukwu mmanụ n'ime mmiri, na-egbu azụ na-egbochi ọkụ sitere na osisi mmiri mmiri photosynthetic.
Mmiri dị n'elu
Mmiri dị n'elu gụnyere mmiri okike a na-ahụ n'elu ụwa, dị ka osimiri, ọdọ mmiri, ọdọ mmiri, na oké osimiri. Ihe ndị a na-abanye na mmiri na mmiri igbari ma ọ bụ anụ ahụ mix na ya.
Enwere microorganisms n'ime ahụ nke mmiri. Ndị a gụnyere aerobic na anaerobic ntule.. Mmiri na-enwekarị microorganisms, ma ọ bụ aerobic ma ọ bụ anaerobic, dabere na ihe ndị na-emebi emebi kwụsịtụrụ n'ime mmiri.
Oke microorganisms na-eri ma na-ebelata ikuku oxygen, na-akpata ọnwụ nke aerobic ntule ma na-emepụta nsị na-emerụ ahụ dị ka amonia na sọlfọ.
Mmiri mmiri ozuzo na-esi na mmiri ozuzo na-amịpụta ọgwụ na-egbu egbu na ihe ndị metụtara ala ma banye n'ime ala, si otú ahụ na-emerụ mmiri dị n'ime ala.
Ná mba ndị ka na-emepe emepe, ndị mmadụ na-aṅụ mmiri a na-adịghị edozi kpọmkwem site na osimiri, iyi, ma ọ bụ ebe ndị ọzọ. Mgbe ụfọdụ, a ga-enwe mmetọ sitere n'okike nke microorganisms dị ka nje, nje bacteria na protozoa kpatara.
O yikarịrị ka nke a eke ofufe na-ebute ọrịa mmadụ siri ike na ọnwụ nke azụ na ụdị ndị ọzọ.
Mmetọ site n'ihe kwụsịtụrụ
Ọ bụghị kemịkalụ niile na-adị mfe mgbaze na mmiri. A na-akpọ ihe ndị a "particulate matter." Ụdị ihe ndị a nwere ike imebi ma ọ bụ ọbụna gbuo ihe ndị dị n'ime mmiri.
Ọ bụ ihe a ma ama ịhụ ka ụlọ ọrụ dị iche iche si eji kemịkalụ a na-atụba ozugbo na isi mmiri. Agrochemicals eji emebiga ihe ókè n'ọrụ ugbo iji chịkwaa ụmụ ahụhụ na ọrịa ga-emecha banye n'osimiri, na-emebi ihe ndị dị n'ime mmiri, na-ekpochapụ ụdị ndụ dị iche iche na itinye ndụ mmadụ n'ihe egwu.
Ọtụtụ mgbe, anyị na-ekwu na mmiri nwere ihe oriri dị mma maka ndị dị ndụ, n'ihi ya, ọ dịghị mkpa imebi ya. Ma nchọpụta nke nnukwu fatịlaịza nke ugbo na ụlọ ọrụ mmepụta ihe na mmiri ọṅụṅụ gbanwere ọnọdụ ahụ dum.
Ọtụtụ nsị, fatịlaịza na nsị nwere nnukwu ihe oriri na-edozi ahụ nke nwere ike ịkwalite uto nke algae na ahịhịa na mmiri, na-eme ka ọ ghara ịṅụ mmanya na ọbụna na-ekpuchi ihe nzacha.
Mmiri fatịlaịza na-esi n'ala ugbo na-emetọ mmiri dị n'osimiri, iyi, na ọdọ mmiri ruo mgbe o ruru oke osimiri. Fatịlaịza bara ụba na nri dị iche iche dị mkpa maka ndụ ihe ọkụkụ, na mmiri dị ọcha a na-emepụta na-agbanwe nguzozi eke nke ihe ndị dị mkpa maka osisi mmiri.
Isi mmalite na ụdị mmetọ mmiri
A na-ekekarị isi mmalite nke mmetọ mmadụ nke na-emetụta ogo mmiri ụzọ abụọ:
Isi mmalite nke mmetọ
Isi mmalite nke mmetọ na-abụghị isi
Ka anyị hụ nke ọ bụla n'ime ha:
Isi mmalite nke mmetọ: Isi mmalite mmetọ na-ezo aka na isi iyi mmetọ nke na-ebute mmetọ otu ma ọ bụ nke pụrụ iche n'otu mpaghara dịpụrụ adịpụ ma ọ bụ amachibidoro. Otu esi aghọ: mwepu mmiri na-ekpofu ụlọ, mwepu mmiri mkpofu ụlọ ọrụ, ọrụ mkpofu dị ize ndụ, mkpọpu m, ntapu, mpụ na mberede, wdg.
Isi mmalite nke mmetọ: Ha bụ isi mmalite nke mgbasa, gụnyere ihe omume na-ekpuchi nnukwu ebe nwere ike ịkpata mmetọ n'okpuru ala, na n'ezie enweghị ike ịkọwa ya nke ọma na nkenke. Ụfọdụ ihe atụ sitere na isi mmalite: ọrụ ugbo na anụ ụlọ, mkpọpu mmiri n'obodo ukwu, iji ala eme ihe, ebe a na-ekpocha ahịhịa, ebe ikuku na-ekpo ọkụ, na ihe omume ntụrụndụ.
Isi mmalite nke mmetọ: Ha na-ezo aka na ọkụ ma ọ bụ ọrụ mgbawa ugwu.
Isi mmalite nke mmetọ teknụzụ: Ụdị ihe mmetọ a na-adabere na ụlọ ọrụ mmepụta ihe na oriri ụlọ, gụnyere njem ụgbọ ala nke chọrọ mmanu mmanu.
A na-emepụta ụdị mmetọ a site na microorganisms, dị ka nje bacteria, nje, protozoa O nwere ike ibute ọrịa ndị siri ike dị ka ọgbụgbọ, typhus, na ịba ọcha n'anya.
Ebe o si malite bụ ihe mkpofu mmadụ na-emepụta, dị ka anụ ụlọ. Ọnụnọ nke ihe ndị na-emebi emebi ma ọ bụ ngwa ngwa na-emebi emebi na mmiri na-akwalite uto nke nje bacteria na-eri oxygen dị ugbu a. Hypoxia na-eme ka o siere ihe ndị dị ndụ aerobic ike ịdị ndụ, ihe anaerobic ntule na-ahapụkwa ihe ndị na-egbu egbu dị ka amonia ma ọ bụ sọlfọ.
Otú ahụ ka ọ dịkwa maka acid, salts, na ọla ndị na-egbu egbu. N'ihe dị elu, ha nwere ike ime ka ihe ndị dị ndụ na-emebi emebi, mbelata mmepụta nke mmepụta ugbo na corrosion nke akụrụngwa ọrụ.
Otu na-aga maka nitrates na phosphates. Ha bụ ihe soluble dị mkpa maka mmepe osisi ma nwee ike ịkwalite uto nke algae na ihe ndị ọzọ. Ụdị mmetọ a nwere ike iduga eutrophication nke mmiri, na-achọ iji oxygen niile dị ugbu a. Nke a na-egbochi ọrụ nke ihe ndị ọzọ dị ndụ ma na-ebelata ihe ndị dị ndụ n'ime mmiri.
Dị ka mmanụ, mmanụ ụgbọala, plastik, pesticides, wdg. Ha bụ ihe ndị nwere ike idowe n'ime mmiri ruo ogologo oge ma na-esiri microorganisms ike ịkụda.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere ụdị mmetọ mmiri dị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Gburugburu » Ụdị mmetọ mmiri
Ndị na-anakọta anyanwụ